Isi Ndabere Images Mere Mfe | Martech Zone
Isi Background Images mere ngwa ngwa
Monday, December 18, 2006 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
Njirimara mara mma ị ga-ahụ n'ọtụtụ saịtị bụ ebe mpaghara ọdịnaya dị n'etiti na-egosi iji kpuchie peeji ahụ na ndobe ndo. Ọ bụ n'ezie usoro dị mfe iji mee ka blọọgụ gị mara mma (ma ọ bụ weebụsaịtị ndị ọzọ) nwere otu eserese.
Chọpụta otu ọdịnaya gị si dị obosara. Ihe Nlereanya: 750px.
Wụpụta onyonyo na ngwa ihe atụ gị (M na-eji ihe atụ) saa mbara karịa mpaghara ọdịnaya. Ihe Nlereanya: 800px.
Debe ndabere nke ihe oyiyi na ndabere ị chọrọ inwe n'akụkụ ọ bụla nke blog.
Gbakwunye mpaghara ọcha na ndabere.
Tinye ndò na mpaghara ọcha nke si n'akụkụ abụọ nke mpaghara ahụ pụta.
Debe ebe akuku obosara site na 1 pixel n'ogologo. Nke a ga - eme ka onyonyo ahụ budata ọmarịcha na kọmpat maka ịtụgharị ọsọ ọsọ.
Mbuputa ihe oyiyi.
Nke a bụ otú m si jiri ya kọwaa ya (rịba ama na m nwere mpaghara ihe ọkụkụ toro ogologo karị… nke ahụ bụ ka ị hụ ihe m na-eme):
Nke a bụ otu ihe atụ nke etu esi rụpụta ga-eji ihe onyonyo bekee mee:
Nke a bụ otu esi etinye ihe oyiyi ahụ site na iji akara ahụ gị na gị CSS faịlụ.
n'azụ: # B2B2B2 url ('oyiyi / bg.gif') ikwugharị-y etiti;
Nke a bụ mkpofu nke ụdị ụdị mkpado ahụ:
# B2B2B2 - setịpụ agba agba nke ibe ahụ. N'ihe atụ a, ọ bụ isi awọ ka o kwekọọ na isi awọ na onyogho.
url ('oyiyi / bg.gif') - esetịpụ ndabere oyiyi na ị ga-achọ iji.
ikwugharị-y - setịpụrụ onyonyo ikwugharị na axis ahụ. Ya mere, ndabere ndabere ga-ekpeghachi si n'elu na ala nke na peeji nke.
etiti - setịpụrụ ihe oyiyi na etiti nke ibe ahụ.
Ọmarịcha ma dịkwa mfe… otu onyonyo, mkpado otu ịke!
Tags: ndaberendabere oyiyi
Mavericks na-arụ ọrụ: Onye na-ego ọrụ?
Dec 18, 2006 na 11:55 PM
Ejirila dugg post a!
Feb 16, 2009 na 4:42 PM
Daalụ. Arụ ọrụ nke ọma m!